လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ပေါင်း 1 အပတ်က #969 by Dariussssss
ကြှနျတေျာ့အတွက်အနည်းငယ် paywares.ALL default အနေနဲ့လေယာဉ်နှင့်အတူ FSX ချိုးဖဲ့ကြ၏။ အဘယ်သူမျှမကရေဒီယိုနှင့်မျှမ GPS စနစ်ရှိပါတယ် .....
ရုံမကြာသေးမီကတပြင်လုံးကိုအရာ-install ... တဖန်ငါပြုဦးမယ့်တာလမ်းမရှိသောပါပဲ။ ဒါကြောင့်မည်သည့်ယင်းပြဿနာကိုဖြေရှင်းလမ်းနှင့်ဘာငရဲကြောင်းရှိသနည်း အဲဒါကဘာမှားနေလို့လဲ?
လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ပေါင်း 1 အပတ်က #970 by DRCW
သင်ရုံကမချစ်ကြဘူး, ငါအများကြီးအခါသမယတွင်တူညီသောလုပ်ဖို့ရှိခဲ့တယ်။ ပထမဦးဆုံးအရာကလုပ်နေခြင်းကိုခံရအံ့သောငှါဆော့ဖ်ဝဲ Uninstall ရန်ဖြစ်ပါသည်။ နောက်တစ်နေ့အရာအဓိကဖျက်ပစ်ရန်ဖြစ်ပါသည် FSX cfg, ပြီးတော့ restart လုပ်ပါ FSXသင်ပထမဦးဆုံး download လုပ်သည့်အခါကဖြစ်သကဲ့သို့, ဒါကြောင့်တစ်ဦးလတ်ဆတ်တဲ့တစျခုနှငျ့တ cfg ကိုအစားထိုးပါလိမ့်မယ် FSX။ သငျသညျတဖနျ gauge အတည်ပြုရပါလိမ့်မယ်အအားလုံးသည်သင့်ရဲ့ download လုပ်ဆော့ဖျဝဲနေဆဲရှိရလိမ့်မည်။
လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ပေါင်း 1 အပတ်က - လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ပေါင်း 1 အပတ်က #984 by DRCW
ငါသည်သင်တို့ကိုဖွယ်ရှိဆက်ပြောသည်အဆိုပါ payware အစီအစဉ်များထဲကတစ်ခုအတွင်းမှာက Shared ဖိုလ်ဒါကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်သူကဆက်ပြောသည်သင့် FSX ပကျြစီးဖြစ်လာရန်။ သင့်ရဲ့ဖော်ပြချက်ကနေက gauge folder ထဲမှာဖွယ်ရှိသည်။ အဆိုပါ payware တစ်နည်းနည်းနဲ့သည် radiostack နဲ့ GPS ဖိုလ်ဒါယိုယွင်းခဲ့သည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုတဖန်ပြန်စဖို့ရန်မလိုပါမျှော်လင့်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်ရုံလုပ်သူများအတွက်တစ်ဦးချည်တှငျငါထားကြပါလျှင်ယင်း၌တည်ရှိ၏ FSX အပိုင်း ။ ငါကကူညီပေးသည်မျှော်လင့်ပါတယ်
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်:2နှစ်ပေါင်း 1 တပတ်အကြာအားဖြင့် DRCW.
လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ပေါင်း 1 အပတ်က #990 by Dariussssss
ရယ်စရာအမှုအရာသူတို့အလုပ်ကိုဖြစ်ပါသည်။ ငါအချို့သောမူရင်းလေယာဉ်တစ်စင်းကို load တဲ့အခါသူတို့နှစ်ဦးစလုံးသွားပြီနေကြသည်။
ငါပျံသန်းကို set up ပြီးနောက်ပြန်မယ့် .... အဆိုပါ ATC ရှင်းလင်းရေးစသည်တို့ကိုရသူတို့ထဲကနှစ်ဦးစလုံး။ တော်တော်လေးသူကပြောတယ်လိုက်တယ်။ ငါ PMDG 747 ကြောင့်ဖြစ်စေတဲ့ခဲ့ထင်ပါတယ်။ ဒါကိုယ်ကဒဏ်ငွေပါလိမ့်မည်ထင်သည်ယခုအခါဖယ်ရှားပါ။